SARIPIKA: Fijery Mahafanina Avy Any An-tampon’ny Tilikambon’i Shanghai · Global Voices teny Malagasy
SARIPIKA: Fijery Mahafanina Avy Any An-tampon'ny Tilikambon'i Shanghai	Voadika ny 17 Febroary 2014 22:01 GMT
Zarao: Vadim Makhorov sy Vitaly Raskalov dia nandefa onja mandona tety anaty aterineto tamin'ny 12 Febroary 2014 fony nampakatra lahatsary iray misy an-dry zareo nihanika ny tilikambon'i Shanghai. Ilay Tilikambon'i Shanghai mirefy 2,073-foot (632-metatra) rehefa vita no ho ny faharoa avo indrindra erantany manaraka ny Burj Khalifa ao Dubai.
Nitafatafa tamin'ity tarika Rosiana ity ny That's Shanghai mikasika ny niainan'izy ireo ilay fianihana.
Jereo ireto sary mahavariana ireto izay nalain'izy roa avy eny an-tampon'ny Tilikambon'i Shanghai, ary ny saripika sasany maneho an'i Shanghai. Ny sary rehetra dia fanomezan'i Vadim Makhorov sy Vitaly Raskalov avy ao amin'ny “On the Roofs” ary naverina navoaka miaraka amin'ny fanomezan-dàlany.
Nandika avylavitra@avylavitra Tantaran'ny Azia Atsinanana farany 2 andro izayMakaô (Shina)Famoretan'ny Mpitondra Ao Makaô Amin'ireo Mpikatroky Ny Demôkrasia Mitaky ny Zo Hifidy Mpitondra
5 andro izayKambodzaMiverina Misokatra Indray Ny Kianjan'ny Fahalalahana Ao Kambodza, Toeran'ny Fanoherana Ary Endriky Ny Fahalalahana Maneho Hevitra
Vakio amin'ny teny русский, Español, Swahili, Français, فارسی, বাংলা, English
Mediam-bahoakaSaripikaTsidikaZavakanto & Kolontsaina
Tweet Tantara Malaza Indrindra Manerantany 1 andro izayAfrika MaintyMitokona ny Mpitsabo, Tsy Voafehy Ny Boko Haram, Matahotra Ny Hianahan'ny Ebola Ireo Nizeriana
1 andro izayAfrika Avaratra sy Afovoany AtsinananaLahatsarin-Jazakely Syriana Avotra Avy Amin'ny Korotam-Baton'ny Trano Ravan'ny Baomba